Kpọọ ngwa ngwa! : Martin Vrijland
Kpọọ ngwa ngwa!
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 12 March 2019	• 6 Comments
Ọ bụ oge na-akpali akpali, n'ihi na iguzogide ọrụ idere onwe m n'onwe m na-adabere n'ọtụtụ dị ukwuu. Nke a pụtara na nchịkọta Facebook dị ukwuu nke na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na-abịa site na Facebook gaa na ebe nrụọrụ weebụ m dara adaba. Nke a pụtara site na ọnụ ọgụgụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na a na-eziga ozi ọtụtụ narị ugboro, ọnụọgụgụ ndị na-agụ akwụkwọ na abanye na saịtị m site na Facebook adịghị abawanye. O doro anya na e nwere mkpọchi kpụ ọkụ n'ọnụ na Facebook ma nke ahụ pụtara na nnwere onwe ikwu okwu na akwụkwọ ka dị, ma na omume ọ dịghị onye na-ahụ ya ọzọ. A naghị egosiputa ihe niile na-esi na isi ma ọ bụ na-emegide ozizi nke emegide. Ọ dị mma ịnwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụazụ 18 puku mmadụ na Facebook, ma ha anaghị ahụ ozi m ma ọ bụ na ha adịghị ahụ ha ọzọ.
Gini mere i kwesiri iji chegbuo onwe gi? N'ihi na ọ bụ naanị ọtụtụ mmadụ ka ha na-ahụ maka njikwa a na-ahụ maka igbe dị na mgbasa ozi ndị isi na mgbasa ozi ọzọ. "Ọfọn, ndị mmadụ na-amacha onwe ha", ị nwere ike iche. Echeghị m na ndị mmadụ bụ ndị nzuzu; Nanị m na-ekwu na egwu egwu aghọwo ọkaibe nke na ọ na-adị mma mgbe ụfọdụ ịnụrụ ụda nke onwe ya. Echere m na egosila m na enwere m ike ịkwalite ihe ndị mmegide a na-achị achị na-eme ka ha daa, belata ma ọ bụ gbaghaa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụda a onwe a nọgide na-adị, nkwado gị dị ezigbo mkpa. Aghaghị m iburu ụgwọ niile maka ebe nrụọrụ weebụ a nakwa n'ihi na etinyewo m isi m n'elu ala, aha m na-esite na ntanetị, na-eme ka ọ sie ike ịmepụta ego. Ịgbaso ihe ndị dị ugbu a na ịchọta n'ike mmụọ nsọ maka ederede bụ ihe ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-eme site n'enyemaka nke otu obere ụlọ akụkọ. Eleghi anya ha nwere igbe enyemaka nke a (AIVD). Ana m eme ihe niile site na A ruo Z site naanị onwe m ma nwee ndụ n'enweghị ego. Nke ahụ pụtara na ọ bụghị naanị na m na-eme njikwa ihe ntanetị, ntanetị weebụ yana ọrụ ntanetị, ma deekwa ihe niile gbasara onwe m ma dịrị ndụ na nkwado gị. Nke ahụ nwere ike ịdị ka ihe achicha achicha, mana buru n'uche na ọtụtụ weebụsaịtị na-arụ ọrụ nke ọtụtụ editọ ma eleghị anya nwere nnukwu ego ha nwere.
M na-etinye bọmbụ 500 n'oge na-adịbeghị anya na ederede ederede PHP nke na ebe nrụọrụ weebụ na-agba, n'ihi na koodu a anaghịzi akwado. Nke a bụ ihe dị oké ọnụ ahịa maka onye edemede nke na-anwa idebe isi ya n'elu mmiri. Ebe nrụọrụ weebụ na-agagharị ugbu a. Nsogbu na-esote bụ ịchọ ụzọ ị ga-esi mechie ihe mgbochi.
Enweghi obi iru uju, kama obu ngwa ngwa iji gh oo onye otu ma kwado, n'ihi na o na-esiwanye ike ikwusi ike. Kekọrịta ozi site na ozi nzuzo, ozi-e ma ọ bụ isi ndị mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ m, ma ugbu a: Bụrụ onye otu. Nkwado gị chọrọ ngwa ngwa! Daalụ n'ọdịnihu!
Igwe okwu Brain-Kọmputa ugbua na okwu mkpirikpi: enwere ike ikwu Facebook n'oge na-adịghị anya? Azịza: ee
5G na nsụgharị nke mmadụ
Microsoft Hololens 2 na-atọ ụtọ ihe ga-ekwe omume na njikọ ụbụrụ nke intaneti
Ntak emi Luciferianism, amoosu na transgederism ghọrọ ihe dị mkpa
Tags: onyinye, agba, òtù, Martin Vrijland, nkwado
chris-nwa dere, sị:
12 March 2019 na 22: 10
Enwere ọtụtụ nyiwe nkwurịta okwu, oge eruro ka ha tụfuo Facebook, ha nwere ihe ha ji eme nnyocha.
M na-ahụ gị Martin dị ka akụkụ nke netwọk free, ọ dị mkpa itinye ego na ya ugbu a, ị nwere nkwado m!
13 March 2019 na 10: 53
Na e nwere nhọrọ dị ukwuu, n'echiche m, ọ bụ nsogbu ahụ kpọmkwem. Ndị mmadụ nwere ike ịhọrọ site n'ọtụtụ ebe na ntanetị nke ọmụma na oge mwepụ nke ọha mmadụ na-alaghachi azụ, mana n'ụzọ dị iche ... ọ dị ọtụtụ ọkaibe karị.
Ọ na-eme ka ị mara ụwa nke ọzọ nke otu ị nọ na ya, ma ọ bụ na-ejikọta ya na okpukpe. Ọ bụrụ na ịnọghị na otu ọ bụla ma ọ bụ kọlụm, ị naghị etinye aka na ihe ọ bụla, yabụ na ị nweghị ihe ọ bụla. N'ụbọchị ndị a, ogidi ndị ahụ niile apụla n'èzí ma ị họrọ n'azụ kọmputa maọbụ smartphone nke otu (s) ndị ị nọ na ... na ị nwere ike ịchọta ihe ọmụma.
Ozi na ụzọ ndụ a na-acha agba ma na-eduhie, dịka ọ dị n'oge ochie n'oge ogidi, kama ozi bara uru dabere na eziokwu. Ihe kachasị ndị mmadụ (ma ọ bụ) na-atụle na mgbakwunye na ọrụ ha bụ oge amaghị ama. Ọbụna ihe ndị mmadụ na-eme maka ọrụ ha bụ ihe nzuzo, dị ka agbachitere na nkwekọrịta ọrụ na nkwekọrịta ikpe. Otu ọkàiwu agaghị ekwu na ọ na-ezigara ndị amaala aka ha akwụkwọ ozi egwu, n'ihi na onye ahịa ya na-akwụ ụgwọ maka nke ahụ ... naanị inye ihe atụ. Ndị mmadụ na-ahọrọ ilegide anya ma na-emeso ihe dị elu n'èzí ụwa, ka ha wee ghara ịnwe ihe ize ndụ nke ịbụ ndị a na-ahụtụbeghị, nke a na-ele anya na n'olu ha na nke ịlafu ọnọdụ ha.
A ghaghị ime ka mmadụ kwenye n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ịchọ Martin Vrijland n'onwe ya. Nke a siri ike n'ihi na e nwere ọtụtụ mmegide a na-achịkwa. Kedu ka o si kwe omume na mmegide dị ukwuu na-achịkwa? O doro anya na ụgha ndị ahụ dị oke ezu na eziokwu zuru oke bụ ihe siri ike ịhụ na njedebe anyị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agọnahụ mgbe ha hụrụ ikpe na-ezighị ezi na gburugburu ebe obibi ha ma ọ bụ mgbe ha hụrụ ụfọdụ ụgha na usoro. Ndị nke ndị mmadụ abụghị nanị ndị dike, ma atụrụ ọma. Naanị mgbe atụrụ ndị a na-amalite ịhụ na ha na-aga n'ihu na-egbu anụ, ha dị njikere ime ihe. Ma, ọ dị mwute, ọbụna mgbe ahụ, ọtụtụ atụrụ na-amalite iti mkpu ma ọ bụ ịda mbà n'obi, nke mere na ha apụghị iguzogide. N'ihi ya, anyị ga-achọ atụrụ na-alụ ọgụ!
Ndị dike na ndị nwụrụ anwụ na-achọ eziokwu ga-abịa n'oge na-adịghị anya site na ebe nrụọrụ weebụ Martin Vrijland, ma olee otu anyị si abịaru atụrụ a ọgụ?
13 March 2019 na 03: 31
13 March 2019 na 11: 28
M ghọtara na ị pụtara nke ọma.
Ma echere m na onye edemede a na-eji Facebook eme ihe kpọmkwem n'ihi na ọha mmadụ nọ n'ebe ahụ (na-ekwu okwu banyere anụ ụlọ)
Ma olee usoro ị na-achọ?
17 March 2019 na 12: 27
hey keazer, ee, ghọtara na FB bụ ihe nkesa kwesịrị ekwesị iji ruo ọha na eze, jiri FB maka afọ ole na ole mụ onwe m, hụkwala mgbochi nke FB, ọtụtụ akụkọ ndị e wepụrụ site na nchịkọta 30 ma ọ bụ kpamkpam. inweta whatsapp, FB ugbu a nnukwu tụnyere ihe ọ bụla ọzọ ikpo okwu mgbe ọ na-abịa data. Enweghị m ahụmahụ dị ukwuu na nhazi ndị ọzọ, mana enwere iri na abuo na 80 na akaụntụ 300 nke nwere ike inye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ abawanye ma dị ike, onye ahụ nwere ike ịgbanwee iji kee ike a. Na mbido n'izu a, FB gbochiri ogige nke oke, mgbe nnukwu iwe na-aga n'Ịntanet, ọbụnadị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, a gbanwere ihe niile n'ime oge 24 na FB gosiri na ọ mehiere, nke a bụ mmehie ma ọ bụ ihe ọzọ. nyocha mmeghachi omume, onye maara. n'ihi na m n'onwe m na-ekwu bye bye FB
13 March 2019 na 16: 51
A ghaghị akwado Martin. Nye ndị niile nyere m ikike dịka ikike ma ọ bụ ịghọ onye so na ya. Nke a ga-ekwe omume. Martin bụ naanị onye na-adịghị n'okpuru ọchịchị akara !!!!
" NKWU: Akwa mkpu nke ọdachi ụwa nuklia na nso nso!
49 gburu na mwakpo ala abụọ na Christchurch New Zealand »
Nleta nile: 11.632.923
Agnes Jonckheere op Egwurugwu na-anọchi anya okpukpe okpukpe na-anụ ọkụ n'obi ebe ndị na-akwado ya na-eche na ha na-alụ ọgụ maka 'iche iche na nsonye'
Danny op A ga - enwe ndị isi na - agagharị na ikpe Jeffrey Epstein?
Wilfred Bakker op Esemokwu maka usoro ochichi onye kwuo uche (FvD) buru amụma
2 igwefoto op Esemokwu maka usoro ochichi onye kwuo uche (FvD) buru amụma
2 igwefoto op Ihe kpatara transgender ji bụrụ iwu ọhụụ maka narị afọ 21 na heterosexual na-apụ n'anya